Ambongadiny chandelier PC-8262 hazavana mirentirenty chandelier vy mpamatsy mpanamboatra sy mpamatsy | Langsheng
Chandelier PC-8262 Light chandelier metaly kanto hazavana
Fitaovana: vy elektrofika + akrilika
Loko: ny titanium volamena amin'ny toerana misy anao. Chrome / Titanium Mainty
Size: savaivony 60/80 / 100cm
Ny KICHLER Eris 16.75 in. 8-Light Polished Nickel Chandelier dia misy kristaly optique izay mamily ny hazavana hamoronana vokatra mamirapiratra. Izy io dia mitazona takamoa miisa 8 manome hazavana mamirapiratra. Miaraka amin'ny volavolan-keviny tamin'ny taona 1960 sy ny famaranana nikela voahosotra, ity chandelier ity dia manampy ny fomba ankehitriny amin'ny haingon-trano rehetra.
Ny fananganana vy dia miantoka ny tanjaka sy ny faharetana
Mampiasa bolam-baovaon'orinasa B miisa 60-Watt valo (tsy tafiditra)
Azo ampiasaina amin'ny modely nikela poloney 12 in. 2999PN (amidy misaraka)
Ny famaranana nikela voakilasy dia manatsara ny fahitana sary an-tsaina ny haingon-trano ao amin'ny efitranonao
Nomena isa ETL ho an'ny fampiasana azo antoka any amin'ny toerana maina
Ny kristaly optika dia mamorona lamina hazavana tokana
Mety ampiasaina amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fisakafoana ary efitrano fandraisam-bahiny
Ity chandelier ity dia manaitra sy tsy manam-paharoa miaraka amina kristaly an-jatony manjelanjelatra amin'ny tariby izay mivoaka avy amin'ny sehatry ny varahina. Ny fitaovan'ny Brown Bronze dia manome azy io fahatsapana fahagola izay nentim-paharazana nefa ankehitriny. Manampia takamoa haben'ny labozia ary hamirapiratra amin'ny hatsarana tsy ampoizina ny habakao. Ny lamina taratry ny hazavana amin'ny valindrihana dia tsara tarehy. Azonao atao ny mametraka ny anao amin'ny dimmer ary ny ambiansy azonao alaina amin'ny faritra rehetra amin'ny andro dia bonus. Ity chandelier dandelion haingon-trano ity dia safidy mahafinaritra na apetraka ao amin'ny efitranonao manokana izany na omena namana.
Teo aloha: Chandelier PC-214 Crystal art chandelier toetra tsotra chandelier tsotra chandelier
Manaraka: Chandelier PC-8255 Glass vera chandelier toetra tsotra chandelier tsotra chandelier